Uchwepheshe we-Semalt uchaza ama-spammers aphezulu kakhulu emhlabeni wonke 2017 Ukuze Uhlale Uphephile
Izigidi zabasebenzisi be-intanethi zikhathazeka ngokugaxekile nsuku zonke. Kumuntu onolwazi, noma iyiphi i-imeyili entsha ebhokisini lemilayezo engenayo isondela ngokuqapha. Izibalo zibonisa ukuthi ugaxekile usakazeka kakhulu nge-imeyili. Ngo-November 2016, imilayezo yogaxekile yabhalwa ngamaphesenti angama-61 - info window auto width.66 we-imeyili traffic emhlabeni jikelele. Lokhu kusho ukuthi ama-imeyili angama-spam angu-82 ayizigidigidi ajikeleza umhlaba ngosuku. Kungase kushaqise ukuthi cishe amaphesenti angama-80 wegaxekile akhiqizwa iqembu elincane lamaqembu omzimba onzima wogaxekile.
uFrank Abagnale, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , uchaza abakwa-10 abakwa-spammers abaphezulu kakhulu ngo-2017 ukuze uhlale uphephile.
1. I-Canadian Pharmacy
I-Pharmacy yaseCanada mhlawumbe iyinhlangano ye-spam generator egcwele kakhulu emhlabeni. Kukholelwa ukuthi isekelwe e-Ukraine / eRussia, futhi isebenzisa amasu ahlukahlukene e-botnet kanye ne-Chinese web hosting kumasekhi we-clog futhi isakaza 'i-pharma spam'. Kuzigidi zeziphampi ezithumela nsuku zonke, iCanada Pharmacy ihlambalaza ngokwayo njengomthombo ongcono kakhulu wezidakamizwa kanye nezidakamizwa zokuthuthukisa amadoda.
2. UMichael Boehm no-Associates
Lokhu yisikhathi eside sokuthi inhlangano ye-snowshoe spam esebenza ngaphansi kwamagama amaningi namabhizinisi amaningi. Isebenzisa izizinda ezihlukahlukene ezingabizi, ezizenzekelayo kanye ne-VPS yokubamba i-IP ukuze isebenze imiqulu emikhulu yogaxekile.
3. I-Yair Shalev (Kobeni Solutions)
I-Hardcore snowshoe spammer I-Kobeni Solutions isekelwe eFlorida futhi ikholakala ukuthi iyisisulu somlingani kaDarrin Wohl, ogaxekile we-ROKSO spammer. Ngo-2014, u-Yair Shalev wayala ukuthi akhokhe imali engama-dollar ayi-350 000 nge-Federal Trade Commission (FTC) esitokisini esamxhumanisa nokuthumela ama-imeyili ogaxekile kubathengi ngesikhathi kukhishwa u-Obamacare. Ema-imeyili, wayexwayise abamukeli ukuthi uma bengenakuqhafaza isixhumanisi esinikeziwe ngokushesha ukuthenga uhlelo lomshuwalense, bezophula umthetho.
Le spammer isebenza namanye ama-spammers we-botnet ababi nakakhulu. Kanye nabangane bakhe, uDante isebenzisa amaseva angenayo kanye nabanikazi be-phony eMpumalanga Yurophu ukwenza i-botnet spamming enkulu.
5. I-Alvin Slocombe (Imisebenzi ye-Cyber ​​World Internet)
U-Alvin Slocombe okwamanje ugaxekile usebenzisa izinombolo ezibandakanya ukuthengiswa kweBrithani 4, iSetraffic Network, i-Ad Media Plus, i-eBox, ne-RCM Delivery. Uchazwe ngokuthi" umlutha wogaxekile " amasayithi wokuqapha ogaxekile kanye nama-ejensi.
i-iMedia Networks ingumhleli we-Lindsay onenkathi yokwenza umsebenzi we-spamming. Isebenza ngokubamba iqhaza kumabhayisikili abakwa-ROBSO abathandwayo. Amakhasimende aseLindsay ne-iMedia Networks asebenzisa ama-zombies we-botnet bese abamba ukulayishwa kogaxekile kogaxekile ngaphandle kwezwe. Le spammer neqembu lakhe liba isikhala samakheli e-IP ezinkampanini isikhathi eside futhi basebenzisa lesi sikhala ukugaxekile.
7. UPetera Severa (Peter Levashov)
Le-cybercriminal yaseRashiya yaziwa ukuthi iphakathi kwezinyathelo ezinde kakhulu zokusebenza nge-spammers. Ukuzikhethela kwakhe kubhalwe futhi kuthengisa spamware nokufinyelela kwe-botnet. Usolakala ukuthi uhileleke ekudaleni nasekukhululeni ama-trojans kanye nama-virus. I-Severa ihlangene nama-spammers amaningi ase-US nase-Eastern Europe. Wayengumlingani no-Alan Ralsky, owahlukunyezwa eMamerican spammer.
8. I-RR Media
esekelwe futhi ekholelwa ukuthi ivela eHuntington Beach, eU.SA, i-RR Media iyinhlangano egaxekile yokugaxekile kwevolumu esebenzisa amagama ahlukene ukwenza imisebenzi yayo yokugaxekile. Izifo zalo ezibhalwe phansi zihlanganisa ukuthunyelwa kwama-imeyili angacelwe kuzingane ukuthi zibenze utshwala nokugembula.
UMichael uphenywe ngoFebhuwari kulonyaka ngemuva kokutholakala enecala lokukhwabanisa kwentambo ngokusebenzisa imisebenzi yakhe yokugaxekile. Leli cala libike ukuthi le spammer isebenzisa ukuhlonza okwakhiwa kwe-snowshoe (ukusebenzisa izizinda eziningi kanye ne-IPs) ukuthumela izigidi zama-imeyili ogaxekile ngaphezu kwamanethiwekhi angama-9.
10. Izindleko ze-Yambo
Le nhlangano ehlelekile yogaxekile isebenza cishe nawo wonke uhlobo logaxekile. Iphuma kumaseva omphakathi, iwasebenzisa futhi iwaxhaphaze ukukhuthaza isofthiwe engalungile nemithi futhi isakaze ngisho nezithombe zobulili ezingcolile ezinganeni, ezitholakalayo nezilwane. Ugaxekile wase-Ukraine futhi uthi uhlinzeka "ngezezimali".
Nge-spam ekukhuphukeni kanye ne-spammers esebenzisa izindlela eziningi eziyinkimbinkimbi njengama-botnets, wonke umsebenzisi we-intanethi udinga ukuqaphela ngokucophelela uma ku-intanethi. Kuhle ukuthuthukisa nokugcina amanye amazinga wokungabaza lapho uvula ama-imeyili amasha kusukela iningi logaxekile lithunyelwa nge-imeyili. Awufuni ukuwa yisisulu salokho okushiwo ngenhla noma yimuphi omunye ogaxekile.